Asan-dahalo tany Beraketa :: Avotra ny vehivavy roa natao takalon’aina • AoRaha
Asan-dahalo tany Beraketa Avotra ny vehivavy roa natao takalon’aina
Voavonjy tany am-panarahan-dia ireto vehivavy roa nentin’ny dahalo natao takalon’aina tamin’ny fanafihana niseho, tany Ampandrandava Beraketa, afak’omaly maraina. Taorian’ny fifandonana teo amin’ireo malaso sy ny mpanara-dia no nahatafavoaka azy roa vavy ireo. Maty voatifitra, tamin’io fotoana io, ny telo tamin’ireo dahalo dimy.
Fanaon’ny dahalo ny mitondra olona atao takalon’aina, aorian’ny fanafihana ataony. Tahaka izany no nahazo ny vehivavy roa tao amin’ilay tanàna voaroba, tany Beraketa. Niroso tamin’ny fanenjehana sy nanampy ny fokonolona ny zandary. Hita ny lalana nizoran’ireo olon-dratsy nihazo an’Andriry. Nifankahatratra ny roa tonta.
“Avotra noho ny fahaiza-manao ananan’ireo zandary izy roa vavy natao takalon’aina na dia teo aza ny fifampitifirana nahery vaika. Niharam-boina ihany koa ny zandary sy ny fokonolona. Nandositra any an-tampon-tanety ny dahalo roa ambiny”, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary any Beraketa.
Fanavaozana lisi-pifidianana :: Kivy amin’ny ireo antoko politika miraviravy tanana ny Ceni
Famoronana haitafy :: Maimaim-poana ny fidirana amin’ ny “Mihamy Mada Fashion”